landa u-Mr D Food - delivery & takeaway ngu-Mr Delivery (Pty) Ltd Play Store apk yakamuva kakhulu app yamadivayisi we-android
Insizakalo yokulethwa kokudla kwaseNingizimu Afrika # 1 UKUKHULULWA KWAMAHHALA kwi-oda lakho lokusebenza lokuqala!
UMnu D Ukudla kusetshenziselwa ukulethwa kokudla kweNingizimu Afrika # 1, okulayishwe ngabantu baseNingizimu Afrika abangaphezu kwesigidi.
Okuyinto eyake yaba yiphayona yokudla okulethwa ukudla eyaziwa ngokuthi yi-Mnumzane Delivery manje sekuyinsiza ephathekayo Mnu D Ukudla, ukuletha ukudla kwesimo sakho semizwa ngqo emnyango wakho. Thola ukulethwa ngokushesha futhi kushise.
UMnu D Ukudla unendawo enkulu yokudlela ngokungafani nenye. Abasebenzisi bohlelo lokusebenza bazothola izindawo zokudlela zaseNingizimu Afrika nezingaphezulu kuka-3000 uku-oda ukudla kokulethwa okusheshayo nokushisayo.
Phakathi kwabaningi abaningi abalindele ukubona izintandokazi ze-SA ezifana:
Izindawo zokudlela ozihlelayo kaningi zizolondolozwa futhi zifakwe kuhlu kuthebhu ethi 'Izintandokazi' ukuze kube lula kuwe.
Okukhethekile nokuphromotha akuyona indawo yokuma noMnu D Ukudla. Thola ozitholayo njengokulethwa kwamahhala, izaphulelo zemali nemali yemenyu yokudla yamahhala. Finyelela amakhuphoni avamile okonga. Lezi zinzuzo zitholakala njalo futhi kuphela kunoma ngubani olande uhlelo lokusebenza ukuze azijabulele.
Ukuthola ukudla kwendawo yokudlela okulethwa ngokushesha futhi okushisayo akukaze kube lula:
Gcina izindawo eziningi bese uqedela ukusesha, ukuphequlula noku-oda inqubo kumompompi ambalwa nje
Yenza ngokwezifiso izinto ozikhethile ngokuya ngokuthandayo
Khokha imali eyodwa yokulethwa
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa i-Cash on Delivery noma iKhadi / i-EFT ngaphakathi nohlelo
Indawo yokudlela iqala ukupheka.
Landelela i-oda yakho ize ifike, noma uyiqoqe njenge-takeaway uma lokho kusebenza kahle kuwe.
KUTHOLAKALA KWEMINININGWANE EYI-2000
UMnu D Ukudla uyatholakala ukuletha ezindaweni ezingaphezu kuka-2000 kulo lonke elaseNingizimu Afrika.
Sithole sonke e-SA kuzo zonke izikhungo ezinkulu zasemadolobheni, kubandakanya iKapa, ​​iGoli, iTheku, iPitoli, iPort Elizabeth, i-East London, iBloemfontein kanye noMgungundlovu.
HLOLA noma ngabe uzizwa unjani
Noma ngabe yini oyifisayo, Mnu D Ukudla sekumbozile. Ukusuka ku-Fried Chicken kuya ku-Poke Bowls, ama-Burger kuya kumaSaladi, ama-Smoothies kuya eSushi, ePizza, eMexico, ngisho ne-Alcohol efana neWayini, iBhiya, Imimoya ukubiza abambalwa. Sesha isigaba sokudla ukuthola okudingayo ku-flash. Uyiqambe igama, sihambisa ngokushesha futhi kuyashisa. Uphequlula, khetha, uthepha uhlelo lokusebenza, irestirenti iyapheka, siyaluthatha bese siwela noma ngabe ukuphi.
Ukujabulisa ukulethwa, ukulethwa kokudla okuthandwayo kuka Mnu D kuyinto ethandwa kakhulu yiSA. Landa uhlelo lokusebenza ukuthola ukudla kwemizwa yakho kulethwe ngokushesha nangokushisayo.